97W | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 97W ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (97W ) တစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၅ ကီလိုမီတာနှုန်း(၉.၃၂ မိုင် နှုန်း) ဖြင့်ရွေ့လျားလျှက်ရှိကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်သော ၅ ခုမြောက် မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသ ဌာနမှ အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါသည်။
The strong tropical disturbance (LPA) over the Philippine Sea, east of Luzon has developed into Tropical Depression 97W (UNNAMED)…currently moving towards the WNW…threatening Northern Luzon.
Time/Date: 6:00 AM PST Mon November 02 2009
Location of Center: 18.0º N Lat 126.3º E Lon
Distance 1: 490 km (265 nm) ENE of Tuguegarao City
Distance 2: 500 km (270 nm) ESE of Aparri, Cagayan
Distance 3: 530 km (285 nm) SE of Basco, Batanes
Distance 4: 590 km (318 nm) NE of Naga City
Distance 5: 605 km (325 nm) East of Laoag City
Distance 6: 670 km (360 nm) NE of Metro Manila
Click to view: 97W’s Latest Wind Analysis new!
Recent Movement: WNW @ 15 kph (08 kts)
Size (in Diameter): — km (— nm) / Average
T2K TrackMap #01 (for Public):6AM PST Mon Nov 01
JTWC Ship Avoidance TrackMap:6AM Mon Nov 02
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 97W, tropical-depression, weather. LeaveaComment »